Archive du 20171117
Governemanta Minisitra maromaro miozongozona
Mananontanona indray ny fanovana governemanta. Ny volana desambra izao no mety hanatanterahana azy io raha ny loharanom-baovao iray akaiky ny fitondrana.
Firaisamonim-pirenena Ataovy mazava ny lalàm-pifidianana
Zava-dehibe ny firosoana amin’ny fifidianana saingy tsy zavatra hatatao fahatany ohatr’izao fa tsy maintsy mitaky zavatra betsaka, ary hajaina ny lalàmpanorenana, hoy ny Firaisamonim-pirenena tamin’ny alalan-dRandriamihavana.
Fifidianana 2018 Tsy tokony hijabahan’ny fanjakana
Mamboatra ny kajy politikany ny HVM ankehitriny ary anisan’ireny ny fifehezana ny andrim-panjakana.
Ben’ny tanàna ambanivohitra Mivondrona hifanohana sy hitaky ny zony feno
Betsaka ireo tsindry hazo lena mihatra amin’ ireo ben’ny tanàna eny anivon’ny kaominina ambanivohitra amin’izao.
Taratasin’i Jean Henoina fotsiny sisa
Mankasitraka anao hatrany aloha ry Jean mba mody miaro anay isan’andro amin’ny haino aman-jery hoe sahy miatrika ny sedra rehetra sady tsy matahotra vozongo aa !
Afera Claudine Razaimamonjy Tapitra hatreo ny raharaha ?
Tsy nisy tohiny intsony ny raharaha Claudine Razaimamonjy, izay voasaringotra tamina kolikoly avo lenta.
ORINASA HAZOVATO May ny toerana fitobian-kazony, an-tapitrisany ny fatiantoka
May omaly folakandro tokony ho tamin’ny 2 ora ny toerana fitobian-kazon’ny orinasa Hazovato etsy amin’ny Forello Tanjombato.
Vita ny tetezan’i Farahantsana Hamokatra herinaratra ihany koa
Notokanana omaly ny tetezana any Farahantsana Mahitsy izay mampitohy ny kaominina Ampanotokana sy Ambohimasina.
Vahiny tonga eto Mila manaja ny soatoavintsika, hoy ny praiminisitra
Notontosaina tetsy amin’ny Carlton Anosy omaly ny atrikasa famaritana ilay antsoina hoe famantarana ny fandehan’ny fitantanana anatiny na IGL izay tohanan’ny rafitra alemana GIZ.
Ivato – Ambohidratrimo Nivaly ny hetahetan’ireo mpandray fisotroan-dronono
Hanokafana toerana fizarana fisotroan-drononon’ny zokiolona eny Ivato. Hanomboka amin’ny volana janoary 2018 izany raha ny fanazavan’ny ben’ny tanàna Randrianarisoa Penjy.
Raharaha Villa Elizabeth Madio ny fitondram-panjakana, hoy i Benjamina Ramanantsoa
Hentitra omaly ny minisitra misahana ny fanajariana ny tany Benjamina Ramarcel Ramanantsoa momba ny raharaha famarotana ny tany St Antoine VI misy ny Villa Elizabeth fonenan’ny fianakavian’ny Pr Zafy Albert.
Mpanakanto nanaratsy ny reniranon’i Nil Hiakatra fitsarana any Egypte
Novidian’i Sherine Abdel Whab lafo ny vava navoakany momba ny reniranon’I Nil, izay manan-tantara sy manana ny maha izy azy ho an’ny firenena Egiptianina.
Kintan’ny Fanatanjahantena Malagasy Rina Narindra Harimbola Randrianarisoa
Ny fanatanjahantena tsy misy fianarana dia zava-poana Kintan’ny fanatanjahantena Malagasy miaraka amintsika eto amin’ity pejy ity anio ny kalaza amin’ny filalaovana basikety baolina, Randriranarisoa Rina Narindra Harimbola fantatry ny maro amin’ny fiantsoana azy an-kianja hoe :
Aiza ny vahaolana ?
Mbola fampanantenana aloha no betsaka fa izay azo tsapain-tanana tsy misy manoloana ny famahana ny olam-bahoaka amin’izao.
Fiara mibahana lalan’ny mpandeha Ho saziana amin’izay
Nampahatsiahy tetsy amin’ny lapan’ny tanànan’Analakely omaly ny tale misahana ny fitaterana eo anivon’ny kaominin’Antananarivo, Landy Raveloson, fa misy ny fepetra tokony ho efa narahana hatry ny ela mikasika ny fifamoivoizana eto Antananarivo renivohitra na ho an’ny mpandeha an-tongotra io na ho an’ireo mpivarotra ary ireo mpitatitra.
Kalitaom-bokatra aty Afrika Lasa aloha ny Malagasy
Nosokafana tamin’ny fomba ofisialy tetsy amin’ny hotely Carlton Anosy omaly ny atrikasam-panarenana mikasika ny fivoriana fahenin’ny komity fifanarahana ekonomika na ny APE sy ny atrikasa fanomanana ny fihaonambe faha-11
Salon de l’habitat 2017 Omena toerana manokana ny asa tanana vita Malagasy
Nosokafana tamim-pomba ofisialy omaly eny amin’ny Forello Expo Tanjombato, haharitra efatra andro, ilay hetsika Salon de l’habitat karakarain’ny agence de communication la premiere ligne.
BNI Madagascar Hanampy ireo maniry hanana tany sy trano
Vonona hanampy ireo fianakaviana Malagasy maniry hanana trano ny banky BNI Madagascar. Anisan’ny antony manosika azy ireo ho mpanohana ofisialy ny “Salon de l’habitat”
Fiarovana ny ain’ny mpianatra Nanolotra fitaovana ny Airtel
Mitohy hatrany ny ezaka tanterahin’ny orinasam-pifandraisana Airtel entina hampiroboroboana ny sehatry ny fampianarana eto amintsika.
Taorian’ny fankatoavan’ny fanjakana ny Dinabe sy nampiharana azy tany aminay dia efa milamina ny fandriampahalemana any amin’ny distrikan’i Betioky Atsimo, hoy ny depiote avy any an-toerana,
Mbola betsaka amin’ireo ankizy ao an-drenivohitr’i Mahajanga no tsy voasoratra anaty bokim-pianakaviana ny anarany.